Mpanamboatra sy mpamatsy latabatra fampiakarana scissor | China Standard Scissor Lift latabatra Factory
Ny latabatra fampiakarana hety efatra dia ampiasaina amin'ny fitaterana entana avy amin'ny rihana voalohany mankany amin'ny rihana faharoa. Antony Misy ny mpanjifa manana toerana voafetra ary tsy ampy ny toerana hipetrahana ny ascenseur na ny fanondranana entana. Azonao atao ny misafidy ny latabatra fampiakarana hety efatra fa tsy ny ascenseur mpitatitra entana.
Ny haavon'ny asa amin'ny latabatra fampiakarana hety telo dia ambony noho ny latabatra fananganana hety indroa. Izy io dia mety hahatratra ny haavon'ny 3000mm ary ny enta-mavesatra indrindra dia mety hahatratra 2000kg, izay tsy isalasalana fa mahatonga ny fikirakirana fitaovana sasany hahomby sy mety kokoa.
Ny latabatra fananganana hety voafetra dia be mpampiasa amin'ny toeram-pivarotana, ny tsipika fivorian'ny fiangonana ary ny fampiharana indostrialy hafa. Ny haben'ny lampihazo, ny fahaizan'ny entana, ny haavon'ny sehatra, sns. Azo omena kojakoja azo atao safidy toy ny tahony fanaraha-maso lavitra.